ညီလင်းသစ်: Special Tulips
အခုတလောမှာ ကြားရကြုံရတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် ဘလော့ဂ်ဖက်လှည့်ဖို့ကို ကျနော်သိပ်စိတ်မပါခဲ့ဘူး၊ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ကို နှစ်ရက်တခါ သုံးရက်တခါ ဆိုသလိုပဲ ရောက်ဖြစ်တော့တယ်၊ အင်တာနက်တက်တိုင်းမှာ သတင်းဆိုဒ်တွေကို ရောက်ဖြစ်ပါတယ်၊ သတင်းတွေ ဖတ်ပြီးရင်တော့ ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် တင်မယ်လို့ အမြဲလိုလို စိတ်ကူးထားပေမယ့် တကယ်တမ်း သတင်းတွေ ဖတ်ပြီးချိန်မှာ တော့ ဘာမှရေးချင်စိတ်မရှိတော့တာနဲ့ ပြန်,ပြန်လှည့်သွားခဲ့ပါတယ်၊ စီဘောက်စ်မှာ လာနှုတ်ဆက်သူတွေကိုတောင် ကျနော်ဘာမှ ပြန်မပြောဖြစ်ဘူး၊ ဒီအတွက်တော့ ဗွေမယူကြပါနဲ့ဗျာလို့.....၊
အခုပုံတွေကတော့ ရိုက်ထားတာ နှစ်လလောက်တောင် ရှိပြီလား မသိဘူး၊ အမှန်က ရိုက်ပြီးပြီးချင်းမှာ စီးရီးအလိုက်ဖြစ်ဖြစ် ဆက်တိုက်တင်ဖို့ အားလုံးပြင်ဆင်ထားပြီးသား...၊ Upload လုပ်ရမယ့် အဆင့်ရောက်မှပဲ ဘာမှမလုပ်ချင်တော့လို့ ပစ်ထားလိုက်တော့ တယ်၊ ကျူးလစ်ကိုတော့ လူတော်တော်များများ ရိုက်ပြီးသားပါ၊ ကလီရှေးလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်၊ ဒီနားက မြို့ကလေးမှာ နွေဦးရာသီ ကျူးလစ်ပန်းပြပွဲလုပ်တုန်းက သွားရိုက်ဖြစ်ထားတာတွေပါ၊ အခုတော့ဂေါ်ဖီပန်းတွေကိုပဲ ကြော်စားဖို့ ပိုစိတ်ဝင်စားနေတယ် :)
ပုံတွေအားလုံးကို Canon EOS450d, Canon Macro 100mm USM နဲ့ရိုက်ပါတယ်၊ မလှုပ်မယှက် ငြိမ်သက်နေတဲ့ ဘလော့ဂ်လေးကို ဖုတ်ဖက်ခါတဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ...။
f/8.0, 1/640, under exposure -1, iso200
f/5.6, 1/400, iso200
f/7.1, 1/500, iso200
f/6.3, 1/400, iso200
f/5.0, 1/250, iso200
f/2.8, 1/800, under exposure -1, iso100
f/2.8, 1/500, iso100
f/7.1, 1/640, iso200
f/4.5, 1/200, iso200
f/5.6, 1/320, iso200
ကောင်မလေးကမေးပါတယ် : Which tulips are the most beautiful?
ကောင်လေးကပြန်ဖြေလိုက်တယ် : The ones which are between your nose and chin.
Posted by ညီလင်းသစ် au 15.6.09
I admire your talent since i got to know your blog.
Tulip9အရောင်စပ်နေပုံလေး သဘောကျတယ်..။
်ကိုဒူကဘာရဲ့ ကျူးလစ်နဲ့ ကိုညီလင်းရဲ့ ကျူးလစ်တွေ သိပ်လှတာပါပဲဗျာ။ ကျူးလစ်တွေကို မမြင်ဖူသေးဘူးဗျာ
တခါလောက်တော့ ရိုက်ခွင့်ရလောက်ပါရဲ့။ အခုတော့ အပြင်ကနေပဲ ငေးနေရုံပေါ့
၆) ၇) ၈) ပုံတွေက
ကျု့ လစ်ရဲ့  အလှတရားနဲ့ အတူ ကောင်လေးရဲ့  အဖြေစကားကိုပါ နှစ်ခြိုက်မိပါတယ်......
အစ်မမေငြိမ်း၊ My wonderful moral thoughts၊ ကိုဖြိုး အားလုံးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊
ကိုရွာသားရေ.. စိတ်မလျှော့ပါနဲ့ဗျာ၊ ထင်းခွေမကြုံ ရေခပ်ကြုံမှာပေါ့၊ ရိုက်ဖို့သာ အဆင်သင့်ပြင်ထားပါလေ၊ :)
Pauk, Sin dan lar, Mie Mie...ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
သိပ်လှတဲ့ပုံလေးတွေပါပဲအကိုရေ။ လှပတဲ့ သဘာဝကို ထင်ရှားအောင် ရိုက်ကူးယူတတ်ပါတယ် :)
ကျူးလစ်ကို အပြင်မှာ တခါမှ မမြင်ဘူးဘူး ..
အကုန်လုံးလှတယ် ဘယ်ပုံပိုလှတယ်လို့တောင် ပြောလို့မရဘူး အားလုံးက လှနေလို့ :))